पटक-पटक सोधिने प्रश्‍न
मलाई मेरै भाषामा सफ्टवेर औजार रप्रविधि चाहिन्छ। तर यसका लागि मैले www.ildc.in मा लिङ्क भेटेको छैन
मैले वेबसाइटबाट सफ्टवेर डाउनलोड गर्न सकिरहेको छुइनँ। यस समस्याको समाधान के हो ?
मसित सिडी छ तर पनि मेरो मेसिनमा सफ्टवेरलाई इन्स्टल गर्न सकिरहेको छुइनँ।
वेबसाइटमा मैले मेरो विस्तृत ठेगाना रेजिस्ट्रार गराएको छु, तर पनि मैले सिडी भेटेको छुइनँ। कारण के हुन सक्छ ?
सिडी नि:शुल्क हो कि अनलाइन वा अफलाइनमा पैसा दिएर किन्नुपर्छ ?
सिडीको सफ्टवेरलाई इन्स्टल गर्न मलाई केही प्राविधिक मदद चाहिन्छ कि ?
वेबसाइटमा रेजिस्ट्रार गर्न म असमर्थ भएको छु, अब म के गरूँ ?
मेरो विन्डो र लिनाक्सभन्दा बेग्लै अपारेटिङ सिस्टम छ, यी सफ्टवेले मेरो प्लेटफर्ममा काम गर्छ ?
विभिन्न भाषाका लागि सूचीका भिन्नभिन्न सूची मैले देखें। म मैले चाहेको सफ्टवेर / प्रयोग मेरो भाषामा छैन तर अर्को भाषामा छ ?
भारतीय अपेन अफिस ? आम मानिसका लागि यसले के फायदा गर्छ?
फायरफक्स के हो ?
ठान्डारबार्ड के हो ?
पिजिन के हो ?
सान्बार्ड केलेन्डार अनुप्रयोग भनेको के हो ?
स्क्राइबास के हो ?
कन्टेन्ट(सूची) मेनेजमेन्ट(प्रबन्धन) सिस्टम(व्यवस्था) के हो ?
मैले रोजेको भाषाको बटनमा एकपल्ट मैले क्लिक गर्दा भनिएका बाषामा मेनू / सूची पाइन्छन्। तर मैले भाषा नै जान्न चाहेँ भने यसका लागि यसका औजार / प्रविधिका लागि कसरी अघिबढ्नु?
म भाषाविज्ञानी हुँ अनि एकजना अनुवादक पनि हुँ। भाषा प्रविधिका क्षेत्रमा केही अपडेट भएको हेर्न चाहन्छु।
के अप्टिकेल क्यारेक्टर रिकोग्निसन(OCR) सबै भाषा / स्क्रिप्टमा छन् ?
हिन्दी सफ्टवेरको औजारले राम्ररी काम गरेको देखैँ, यस्ता अरू भाषामा पनि छन् ?
सफ्टवेर प्रयोगमा समस्यामा परेको छ, कहाँ सहयोग पाइन्छ ?
यस वेबसाइटमा पाठमा केही त्रुटि भेटियो, यी त्रुटिलाई कहाँ कसलाई अवगत गराउनु ?
म केही फाइल अङ्ग्रेजीबाट भारतीय भाषामा अनुवाद गर्न चाहन्छु, यसका लागि मैलै कुनै पनि सफ्टवेर भेटेको छुइनँ।
के म यी सफ्टवेर र फन्टहरू मेरा प्रडाक्ट विकास र आफ्ना व्यापारिक वेबसाइटका लागि उपयोग गर्न सक्छु ?
हामी संस्थान हौं अनि यी सफ्टवेर औजारलाई दैनिक कार्यालयीय काममा उपयोग भएको चाहन्छौं। यसका लागि हामीले प्रशिक्षण प्राप्त गर्न सक्छौं ?
सिडीमा सफ्टवेर प्रयोग गरी आफ्नै भाषामा इमेल पठाउन सक्छु ?
मैले वेबसाइटमा रेजिस्ट्रार गरेको थिएँ तर कूटशब्द बिर्सेंछु।
म भारतदेखि बाहिर बस्छु, म कसी सिडी प्राप्त गर्न सक्छु ?
उत्तर: सबै संवैधानिक रूपमा स्वीकृत २२ वटा भारतीय भाषा सफ्टवेर औजार र फन्टका सिडीहरू लोकार्पण गरिएको छ। एकपल्ट तपाईंले www.ildc.in / www.ildc.gov.in हेर्नुभयो भने देब्रेतिर तपाईंले लोकार्पित भएका भाषाहरू देख्नुहुने्छ।
उत्तर: यहाँ उपलब्ध गराइएका केही औजारहरूको आकार ठुला भएकाले कनेक्सन / बेन्डवाइथ गतिलो हुनु जरूरी छ। अझै एकछिन धैर्य धारण गर्नुहोस्, अन्यथा तपाईंले info@ildc.in मा इमेल पठाएर पिनकोडका साथ सम्पूर्ण ठेगाना दिएमा तपाईंले सिडी पाउनुहुनेछ।
सिडीसित उपलब्ध मेनुयल(पुस्तिका)लाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यसको सफ्टकपी www.ildc.in / www.ildc.gov.in वेबसाइटमा उपलब्ध छ।
उत्तर: के चाहिं निश्चित गर्नुहोस् भने तपाईंले तपाईं आफ्नो ठेगाना पिनकोडका साथ सही रूपमा दिएको छ। सामान्यत:अनुरोध प्राप्त भए पछि एक हप्ताभित्र सिपमेन्टहरूले सिडी उपलब्ध गराउँछन्। डाकविभागले चाहिं स्थानअनुसार 8-10 लगाउँछ। यति पर्खिँदा पनि सिडी भेट्नु भएन भने तपाईंले info@ildc.in.मा इमेल गरी आफ्नो सही ठेगाना पठाइदिनु होला।
उत्तर: माथि साइटमा उल्लेख गरिएका सबै सफ्टवेर औजार र फन्टहरूको हुलाक शुल्कका साथ सबै थोक नि:शुल्क हुन्।
उत्तर : सफ्टवेर इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला सिडीसित उपलब्ध गराइएको मेनुयल(पुस्तिका) राम्ररी पढ्नुहोस्। मेनुयलको सफ्टकपी सिडीमा पनि उपलब्ध छ।
थप जानकारी तथा मददका लागि info@ildc.in
उत्तर: तपाईंले रेजिस्ट्रार गर्न चाहेको साइटको URL लाई सम्पूर्ण त्रुटिपूर्ण सन्देश info@ildc.in मा पोस्ट गर्नुहोस्, साथै रेजिस्ट्रार गर्दा तपाईंले जेजे गर्नुभएको थियो ती प्रयास पनि पोस्ट गर्नु होला, यी सबले हा्मीलाई समस्या समाधान गर्न मदद गर्छ यदि कुनै रेजिस्ट्रार पृष्टलाई सक्षम पार्न छ भने।
उत्तर: विन्डो र लिनाक्समा काम गर्नका लागि औजारहरू भाषाका सिडीमा उपलब्ध गराइएको छ भने काम गर्छ। तर, अपारेटिङ सिस्टमको सबै संस्करणमा प्रयोग नहुन सक्छ, कृपया इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला मेनुयल पढ्नु होला।
उत्तर: यद्यपि हामीले एकै खाले सूची सबै भाषामा राख्‍न चाहेका छौं, तर पनि एउटा भाषामा रहेको औजार अर्को भाषामा नरहन सक्छ,हरेक भाषामा छुट्टाछुट्टै सूची दिएका छौं।
उत्तर: भारतीयOO सुइटमा वर्ड प्रोसेसर अनुप्रयोग(राइटार), स्प्रेडसिट अनुप्रयोग ( केल्क), प्रेसेन्टेसन अनुप्रयोग(इम्प्रेस), ड्रइङ अनुप्रयोग(ड्र) छन्। भारतीय भाषालाई स्थानीयकृत गराउन भारतीयOO सुइटलाई सबै मेनु, स्टेटस बार, गलत सन्देश, युजार प्रम्ट आदिका साथ अपेन अफिसलाई मनपर्दो भार्सन बनाइएको छ। प्रत्येक भारतीयOO अनुप्रयोगमा हेल्प मेनु छन् जसले भारतीय भाषाका विकल्पलाई सघाउँछ अनि अनुप्रयोगको कमान्ड र औजारलाई सहयोग लिन प्रयोग गराउन सकिन्छ।
उत्तर: मजिलाद्वारा विकसित गरिएको अपेन-सोर्स, विन्डो, लिनाक्स र म्याक OS X को नि:शुल्क वेब ब्राउजार हो फायारफक्स, तपाईंले फायरफक्स वेब पृष्टबाट लेटेस्ट भार्सन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक भाषाका सिडीमा फायरफक्सको स्थानीयकृत भारतीय भाषाको संस्करण समावेश गरिएको छ|
उत्तर: ठान्डारबार्ड धेरैजसो अपारेटिङ सिस्टममा काम लाग्ने नि:शुल्क, अपेन सोर्स र क्रस-प्लेटफर्म मेइल क्लाइन्ट हो तर यो विन्डोस, लिनाक्स र म्यासिन्टोससित मात्र सीमित होइन। यो मोजिला कोडबेसमा आधारित हुन्छ, यो रोबोस्ट अनि क्लाइन्टका लागि सजिलो छ, आउटलुक एक्सप्रेसन जस्तो कम्पेटिङ प्रडाक्ट जस्तै तर केही मुख्य सुविधा जस्तै जाङ्क मेइल क्लासिफिकेसन। हरेक भाषाका सिडीमा ठान्डारबार्डको स्थानीयकृत संस्करण छ।
उत्तर: पिजिन भनेको लाखौंले सजिलै प्रयोग गर्न नि:शुल्क चाट क्लाइन्ट हो, तपाईंले AIM, MSN, Yahoo तथा अरू धेरै चाट नेटवर्क एकैसाथ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक भाषाका सिडीमा पिजिनको भारतीय भाषाको स्थानीयकृत संस्करण उपलब्ध छ।
Mozilla Sunbird isacross-platform calendar application, built upon Mozilla Toolkit. The goal is to provide the users with full-featured and easy to use calendar application that you can use around the world. It's entirely stand alone: it doesn't require the bulk of another application, but doesn't offer any integration into other programs. Localized version of Mozilla Sunbird is included in each language CD.
मोजिला सान्बार्ड एउटा क्रस-प्लेटफर्म केलेन्डार अनुप्रयोग हो, यो मोजिला टुलकिटका लागि बनिएको हो। यसको लक्ष के हो भने पूर्णताका साथ उपभोक्तालाई केलेन्डार अनुप्रयोग उपयोग गर्न सजिलो होस् अनि संसारभरि नै तपाईं यसको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो समपूर्ण रूपले भिन्नै खाल्को हो। यसलाई अर्को अनुप्रयोगको थुप्रो चाहिँदैन, तर अरू प्रोग्रामलाई केही सुइको दिँदैन। हरेक भाषाका सिडीमा मोजिला सानबार्डको स्थानीयकृत संस्करण अन्तर्भुक्त गरिएको छ।
उत्तर: स्क्राइबास चाहिं एउटा अपेन सोर्स प्रोग्राम हो जसले पुरस्कृत प्रोफेसनेल लेआउट लिनाक्स, युनिक्स, MacOS X, OS/2 हो अनि "press-ready" आउटपुट संयोजनका साथ विन्डो डेक्सट हो पृष्ट सजावटको नयाँ ढाँचा पनि हो। आधुनिक तथा सरल प्रयोग इन्टारफेसभित्र, स्क्राइबास समर्थित पाब्लिकेसन फिचार जस्तै CMYK कलर, पृथकीकरण, ICC कलर मेनेजमेन्ट अनि असीमित PDF निर्माण छन्। हरेक भाषाका सिडीमा स्क्राइबासको भारतीय भाषाको स्थानीयकृत संस्करण उपलब्ध छ।
उत्तर: कन्टेन्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम भनेको जेनेरिक(सामान्य) ,एक्सटेन्सिबल, प्रोसेस-ड्राइभेन सफ्टवेर हो जुन चाहिं इ-समुदायको रूपमा कम्युनिटी इन्फरमेसन सिस्टम(समुदाय सूचना व्यवस्था) CIS अथवा सोसियल इन्फरमेसन सिस्टम( सामाजिक सूचना व्यवस्था) SIS निर्माणको खाकामा आधारित हुन्छ। यसले निर्माण तथा प्रयोग गर्न अनि इ-समुदायका सदस्यबीच सूचना आदान-प्रदानार्थ सहयोग गर्छ। CMS को भारतीय भाषाका स्थानीयकृत संस्करणका हरेक सिडीमा यो छँदै छ।
उत्तर: औजारका टिप अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध गराइए पनि तपाईंले भाषाका सिडीका लागि इमेल गरी आफ्नो विस्तृत हुलाक ठेगानामा पिनकोड भराएर info@ildc.in मा भन्न सक्नुहुन्छ।
उत्तर: लेटेस्ट(अद्यानुतन) डेभेलपमेन्ट(विकास)का लागि www.cdac.in/gist हेर्नु होला।
उत्तर: हालैमा चाहिं OCR केही भाषामा मात्र का उपलब्ध छन् जस्तै हिन्दी, मराठी, मलयालम अनि पन्जाबीमा मात्र । कृपया हरेक भाषाका औजार सूची छु्ट्टाछुट्टै हेर्नुहोस्।
उत्तर: हालमा TTS हिन्दी भाषामा छन्। के भने, हरेक भाषाका लागि औजारको सूची हेर्नु होला।
उत्तर: उपलब्ध गराइएको मेनुयल पढ्नु होला, अझै पनि समस्या सुल्झिएनन् भने info@ildc.in मा सबै थोक लेखेर पोस्ट गर्नु होला।
उत्तर: अनुवादकहरूको आ-आफ्नै प्रवृत्ति हुन्छ, यी अनुवादहरू 100% सही छन् भन्नेमा हामी छैनौं, तपाईंले विस्तृत रूपमा त्रुटिहरू लेखेर info@ildc.in मा पठाइदिए हामी अत्यन्त आभारी हुनेछौं।
उत्तर: हालसम्म भाषाका सिडीमा मेसिन ट्रान्सलेसन सिस्टम ( यन्त्र अनुवाद व्यवस्था) उपलब्ध छैन।
उत्तर: सबै सफ्टवेर औजार र फन्टहरू गैर-व्यावसायिक उद्देश्यका लागि उपलब्ध गराइएको हो।
उत्तर: सबै सफ्टवेर औजार र फन्टलाई गैर-व्यावसायिक उद्देश्यका लागि उपलब्ध गराइएको हो, प्रशिक्षणको अनुरोध छुट्टै पठाइयोस्।
उत्तर: इमेल क्लाइन्ट सापोर्ट युनिकोड प्रयोग गरी तपाईंको भाषामा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ।
उत्तर: तपाईंले जहिले हामीसित रेजिस्ट्रार गर्नुभएको थियो त्यो युजार आइडि प्रयोग गरेर प्रवेश गरी तपाईंको कूटशब्द बिर्सएँ-पृष्ठमा हेर्नुहोस्। तपाईंको कूटशब्दलाई तपाईंको इमेल आइडिमा पठाइनेछ।
उत्तर: अँ, हामी भारतबाहिर पनि प्रेरण गर्छौं।